KASHIFAAD: Sirta socdaalka hanti doon ee Fowsiya Yuusuf Xaaji Adan - Caasimada Online
Home Warar KASHIFAAD: Sirta socdaalka hanti doon ee Fowsiya Yuusuf Xaaji Adan
KASHIFAAD: Sirta socdaalka hanti doon ee Fowsiya Yuusuf Xaaji Adan
“Waxaan qaban doonnaa dib u eegid aad u fiican oo aan ku eegayno hantida Soomaaliya ee adduunka ee qaaradaha adduunka oo dhan, sidoo kale waxaan la tashanaynaa la taliyalaal xagga sharciga maaliyada oo Soomaali iyo ajnabiba ah,” Fowsiya ayaa sidaas sheegtay Diseembar 27-deedii. “Dawladda Soomaaliya ayaa codsan doonta soo celinta lacag ay hayaan masuuliyiinta Swiss, iyo sidoo kale maraakiibteena iyo diyaaradaheena yaala Jarmalka, Talyaaniga iyo Yaman.”
Qalalaaasihii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya markay socdeen, ayaa dhawr ka mid ah dawladaha ajaanibta ah ay xanibeen keydadkii rasmiga ahaa ee lacagta dawladda Soomaaliya si ay uga ilaaliso in si khalad ah loo isticmaalo. Laakiin, in badan oo hantidii maguuraanka ahayd ee dawladda ee dibadaha taalay, kuwaas oo ay ku jiraan dhismayaashii safaaradihii hore, waa la maalmul xumeeyay ama lamaba hayo.
Sida ay sheegayso warbixin Qaramada Midoobay ka soo baxday oo si hoose loo faafiyay Luuliyo, si xun u maamulidda hantida caamka ah waxay socotay xilligii Dawladda Federaalka Ku meel gaadhka ah, iyada oo 70% dakhligii lagu dhunsaday musuqmaasuq, xatooyo, iyo khasaaro. Inta badan lacagtaas waxaa la tuhunsan yahay in dibadda loo diray.
“Kama laba labaynayno in aan dib u soo ceshano lacag si sharci daro ah loogu xawilay kaydad ajnabi ah, kuwaas oo ay ku jiraan kaydadkii bangiyada ee dawladihii hore, iyo [kuwa laga xaday] gargaarkii lacageed labaatankii sano ee la soo dhaafay,” Sulaymaan ayaa sidaas sheegay. “Waxaan qorshaynaynaa barnaamijyo aan kaga codsanayno jaalayaasheena Soomaalida ah, kuwaas oo ay ku jiraan madaxdii hore ee maaliyadda, [in ay sii daayaan] waraaqaha daba galaya lacagahaas.
“Xaaladda ayaa sii xumaatay kaddib markii uu shaqaalaysiiyay hay’ad [Maraykanka saldhigeedu yahay] la yiraahdo Shulman Rogers si ay u noqoto la taliye dhinaca sharciga ah ayna kaalmayso guddoomiyhii hore ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya,” ayuu yiri. Heshiiskan muranka dhaliyay wuxuu siin lahaa Shulman Rogers $50,000 iyo 3.5% oo ka mid ah hanti kasta oo Soomaaliyeed ama kaalmo lacageed oo ay ku guulaystaan inay soo dhiciyaan.